सम्राट गार्डेन रेष्टुरेण्ट र उद्यमी राजिवFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
सम्राट गार्डेन रेष्टुरेण्ट र उद्यमी राजिव
काठमाडौं । सडकको धुलो र धुँवाबाट एकछिन छुटेर वस्ने मन भएमा साँमाखुसीमा तपाईहरूलाई स्वागत गर्न पर्खेर बसेको छ– निकै सफा र चिटिक्क परेको सम्राट गार्डेन रेष्टुरेण्ट । यस सम्राट गार्डेनभित्र प्रवेश गर्ने वित्तिकै फूलहरु फुलिरहेको गार्डेनको स्वगत जो कोहीलाई पनि आनन्द लाग्छ । अझ त्यो भन्दापनि राम्रो कुरा त सम्राटभित्र पारिवारीक वातावरण हो, जुन सबैका लागि अति आवश्यक छ । यसका संचालक हुन्– युवा उद्यमी तथा होटल व्यवासायी तेजकुमार श्रेष्ठ ‘राजिव’ ।
सम्राट गार्डेन रेष्टुरेण्टमा स्पेशल खानाहरू पनि सस्तो मूल्यमा खान पाइन्छ । क्रिस्पी फिस, क्रिस्पी चीकेन, लेकाली चीकेन र सिजिलिङ म.म. यहाँका स्पेशल र ग्राहकले मन पराएका खानाहरू भएको राजिव बताउँछन् । यहाँ आउने ग्राकहरूले माछा, चीकेन र वदेलका सेकुवा पोलेको प्रति किलोका हिसाबले आफैले पोलेर खान पाउँछन् ।
उनै राजिवले संचालन गर्दै आएका नयाँ बजारको मेन रोडको छेउमा छ– ‘सम्राट पार्टी प्यालेस’ । पार्कीङको राम्रो व्यवस्था भएको उक्त पार्टी प्यलेसमा सात सयसम्मको मानिसलाई पार्टी गराउन सकिने राजिव बताउँछन् । प्रायजसो सधै पार्टी भैरहने सम्राट पार्टी प्यालेसको विशेषता हो– शान्त, पारिवारीक रमाइलो वातावरण र आथित्य सत्कार ।
रामेछापको विकट गाउँ साँघुटारको रिठ्ठावोट भन्ने ठाउँमा जन्मेका राजिवले गरिबीको राप र ताप निकै भोगेका छन् । धेरै दुःख गरेर भए पनि उनले एक घण्टाको बाटो हिडेर गोठपानीको श्री चण्डेश्वरी उ.मा.वि.मा कक्षा दशसम्मको शिक्षा पूरा गरे र उच्च शिक्षाको सपना बोकेर पूँजीवादले ग्रस्त भएको रोगी शहर काठमाडौं आए । ठमेलको सरस्वती क्याम्पसमा कमर्स फ्याकल्टीमा भर्ना त भए तर आर्थिक अभावका कारण उनले पढाइ अगाढि बढाउन भने सकेनन् । काम नगरी एकदिन पनि वस्ने विकल्प नभएको यो शहरमा उनको पढ्ने इच्छा अधुरै भयो तर होटलमा भाँडा माज्दा–माज्दै उनले कुक काम सिके ।
होटलको कामले खाने वस्ने समस्या त हल भयो तर पढाइ पनि छाडेपछि उनले घरको गरिबी सम्झिए । अर्काको होटलमा काम गरेर घरको गरिबीमा कुनै फेरबदल आउने सम्भावना थिएन । त्यसपछि धेरै पैसा कमाउने सपना बोकेर राजिव विदेशतर्फ हानिए । विदेश जानेबेलामा उनले धेरै पैसा कमाइएला, बाआमा, भाइ–बहिनीका भविष्य राम्रो होला र आफ्नै पनि केही होला भन्ने सोचेका थए । तर सोचेजस्तो कहाँ हँुदो रैछ र जिन्दगी । राजिव भन्छन्– ‘‘पाँच वर्ष विदेश वस्दा पनि केही उपलब्धी हुन सकेन, उल्टै स्वास्थ्य नराम्ररी बिग्रीयो । त्यसपछि अब जे भए पनि नेपालै बसेर केही गर्छु भन्ने सोचेर फर्किए । चार–पाँच लाख खर्च गरेर उपचार गरेँ । स्वास्थ्य राम्रो भयो । त्यसपछि नेपालमै केही गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत आयो र आफूले जानेको क्षेत्र होटल लाइन नै भएकाले त्यसैमा हात हाले ।’’
सुरुमा उनले यही नयाँ बजारको ‘गिनोज गार्डेन रेष्टुरण्ट’मा पाट्नर्सिपमा लगानी गरेका थिए । ‘‘तीन–चार वर्ष निकै हम्मे–हम्मे भयो टिकाउन तर हिम्मत हारेनौँ, निरन्तर लागिरह्यौँ र आज यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ’’ राजिव विगत सम्भन्छन् । एउटा काममा सफल भएपछि अरु क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न आँट आउने उनको अनुभव छ । हिजको त्यही गीनोज गार्डेन रेष्टुरेण्ट नाम फेरिएर आज सम्राट पार्टी प्यालेस भएको छ । यसलाई ब्राण्ड बनाउने उनको सपना छ । त्यही सपनालाई विपनामा बदल्न उनले सामाखुसीमा पनि सम्राट गार्डेन रेष्टुरेण्ट ओपनीङ गरेका हुन् ।
बसुन्धारामा कपडा पसल पनि छ जुन उनका जीवन सङ्गी र बहीनी भएर चलाउछन् । अर्को कम्पनी छ ‘ए टु जेट क्लिनर्स एण्ड केमीकल’ । त्यो पनि पाट्नर्सिपमा गरेका छन् । त्यस कम्पनीले अहिले हर्पीक, फिनेल, कोलिन र सावुन लगायतका सरसफाइमा प्रयोग हुने केमीकलस्हरू उत्पादन गरिरहेको छ र त्यो पनि उही गुणस्तरको विदेशी उत्पादन भन्दा धेरै सस्तो मूल्यमा बजारमा उपलब्ध छ । माल्टोरिच जुन हल्क्र्सिको सट्टा खान सकिन्छ त्यसको नेपालमा रहेको मेन डिलरमा पनि राजिवले लगानी गरेका छन् । उनले यो चार–पाँच वर्षभित्रमा गरेको प्रगती हो । भविष्यमा अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने उनको लक्ष्य रहेको छ ।
स्वदेशमै उद्यमी गर्ने मन भएका जो कोहीका लागि पनि उनको सफलता प्रेरणाको स्रोत हुनसक्छ । व्यवसाय गर्ने सबै सफल भएका छैनन् तर उनको सफलताभित्र निरन्तरको मिहेनत त छदैँछ, त्यसको अलवा उनले आफ्नो धरातल र विगतका दुःख कहिल्यै विर्सेनन् । दुःखमा आत्तिएनन् र सुखमा मात्तिएनन् । धैरे गरे, आफ्नो कर्म गर्न छाड्ेनन् । साथीभाइ र आफ्ना ग्राहकसँग सधै पे्रम गरिरहे । त्यसैको परिणमस्वरुप उनको जीवनलाई सफलताले पछ्यायो । त्यसैले हिम्मत नहारौँ, गफमा हैन काममा समयलाई उपयोग गरौँ । जीवनमा संकटहरू÷चुनौतीहरू आउँछन् । चुनौतीसँग खेल्नसक्नेहरू नै सफल हुने हो । राजिवले चुनौतीसँग जुधेँ तर भागेनन् र त सफलताहरू उनको पछि लाग्दै छ ।